Home News Magalada Hargeysa oo Haan shidaal Laga Heley Sedex Ruux oo Midi Geeriyooday
Magalada Hargeysa oo Haan shidaal Laga Heley Sedex Ruux oo Midi Geeriyooday
Waxa shalay gelinkii dambe Magaalada Hargeysa haan Shidaal waxaa ku dhintay qof, halka laba kale oo xaaladooda liidato laga soo saaray.
Saddex ruux ayaa la shegay in loo diray inay soo nadiifiyaan gudaha haanta Shidaalka Kaalinta Cali Baarjeex ee Xaafada Calaamadaha Magaalada Hargaysa, sida ay sheegeen Saraakiisha.
Mid ka mid ah saddexdii ruux ayaa ku dhex dhintay haanta gudaheeda, waxaana ciidanka dam damiska Somaliland ay soo badbaadiyeen labadii kale oo xaaladooda ay liidato.
Axmed Maxamed Sawaaxili oo ah taliyaha ciidamada dabdamiska Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in dhankooda loo soo qeylo qaaday si ay u soo badbaadiyaan qofka gudaha ku haray, balse nasiib darro uu dhintay.
Ruuxa dhintay ayuu taliyaha magaciisa ku sheegay C/fitaax Maxamuud Cismaan, wuxuuna taliye Sawaaxili ka digay in gudaha loo galo haamanka shidaalka, waliba kuwa dhulka hoostiisa ku jira.